Ezi ntụziaka kacha mma maka owuwe ihe ubi blueberries maka oyi - Berry - 2020
Ụzọ iji ihe ubi blueberries: gịnị ka a pụrụ iji tomato bara uru maka oyi
Blueberries bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na ụwa. Ha nwere ọtụtụ vitamin na antioxidants. A na-ejikarị ha emeziwanye ọhụụ, belata cholesterol n'ime ọbara, nakwa iji belata ọrịa nke urinary. A maara na ọtụtụ àgwà dị mma na-anọgide ọbụna mgbe a gbasịrị ọgwụgwọ ọkụ, ya mere taa, ọtụtụ ndị na-eme bilberries maka oyi n'oge obibi.
Ị ma? Nnukwu ọnụọgụ mmụta sayensị egosiwo na iji blueberries budata belata ohere nke ịmepụta ọrịa cancer.
Blueberry grated na shuga
Mmiri ihe ọṅụṅụ Blueberry
Mmiri nke Blueberry
Ntụziaka nke Blueberry Jam Ntụziaka
Bilberry Compote Ntụziaka
E nwere ụzọ dị iche iche a na-esi edozi blueberries maka oyi. Onye ọ bụla n'ime ha na-enye gị ohere ịchekwa ihe ndị dị mkpa, na ọbụna àgwà mara mma nke tomato. Tụlee otú e nwere ike isi nweta nke a na otú e si akpọ nkụ blueberries. N'ụzọ ọ bụla, tomato aghaghị ibu ụzọ kwadebe. Iji mee nke a, buru blueberries, gbanwee ihe ndị mebiri emebi, wepụ akwụkwọ na alaka, tinye ha na sieve na itucha.
Ụzọ nhazi beri n'ihi na mkpụrụ osisi mara mma na-egbuke egbuke anya:
Pectin. A na-agbaze ya na mmiri dịka ntuziaka na ngwugwu ahụ. Mgbe ahụ, a wụsara ihe ngwọta mmiri na tomato ma tinye ha na sieve iwepụ mmiri mmiri mmiri.
Lemọn Site na citrus wepụ ihe ọṅụṅụ kwesịrị ekwesị ma fesaa ha mkpụrụ.
Blanching Kwadebe nnukwu akpa nke mmiri na-esi mmiri na nnukwu efere. A na-etinye osisi tomato n'ime mmiri na-esi na mmiri esi abanye ruo oge ole na ole, mgbe ahụ, ozugbo a na-agba ice. Mgbe obi jụrụ gị, tinye nnọchibido iji wepu mmiri.
Ị nwere ike ihicha tomato na ngwaọrụ pụrụ iche - batrị eletrik ma ọ bụ oven. Na nke mbụ, a na-etinye ha n'àkwà ndị pụrụ iche ma na-egbu ya maka awa 6-10, dabere na nsonaazụ chọrọ. Mgbe ha gbasasịrị, enwere ike itinye blueberries na tank tank. Nzuzo nke ozo na-eme n'ụzọ dị otú a: ọ na-ekpo ọkụ na okpomọkụ nke ogo 70. Tinye akwụkwọ pụrụ iche na mpempe akwụkwọ ma tinye blueberries na otu akwa. Dabere na nke tomato, usoro nchịkọta ga-ewe site na anọ ruo awa iri na abụọ; dịka na usoro gara aga, mgbe obi jụrụ ya, enwere ike wepu ya maka nchekwa.
Ịdị ndụ na mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ nwere uru ọ bara, dị ka a na-eme, blueberries nwere ike ịmịchaa n'okporo ámá. Kwadebe ihe ndozi nke osisi osisi na gauze ma gbasaa mkpụrụ osisi ahụ na ha. N'abalị, a na-atụ aro ịsacha ha na ebe ọkụ na akọrọ. Ọ na-ewe nsị dị otú ahụ na nkezi ụbọchị ole na ole.
Anyị na-akwado ka ị mata ihe ntụziaka maka ịkwadebe tomato ndị ọzọ maka oyi: yosht, cherry, goozberị, dogwood, chokeberry.
Tupu na-egbuke egbuke, a na-akwadebe tomato dị ka ọ dị na ụzọ gara aga: a na-egbute ma kpochaa ya. Tupu na-egbuke egbuke, mkpụrụ ahụ akpọnwụwo, nke mere na ntu oyi anaghị agbanwe tomato n'ime lumps. Mgbe a na-etinye blueberries na pallet na otu akwa oyi akwa, na mgbe ọ gwụsịrị, a na-etinye ihe ụfọdụ na akpa ma ọ bụ igbe. Nke mere na tomato anaghị eri nri site na ngwaahịa ndị ọzọ na refrjiraeto, ị nwere ike ifriizi ha ozugbo na ngwugwu ahụ. Mme ụtọ tomato nwere ike ifesa ha n'ihu shuga.
Ọ dị mkpa! N'ịmara otú e si esi nri maka oyi oyi na-acha akwụkwọ oyi, ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụ eziokwu na ọ dị njọ, iji nweta mkpụrụ osisi ahụ. A na-atụ aro ka ị mee nke a na nkebi: nke mbụ n'ime refrjiraeto ruo mgbe ọ dị kpamkpam, mgbe ahụ, na ụlọ okpomọkụ.
Ụdị ụdị ọrụ a na-eme ngwa ngwa. N'okwu a, n'ihi enweghị ọgwụgwọ okpomọkụ, a nọgidere na-ejide ọnụ ọgụgụ dị ukwuu. Iji kwadebe gị adịghị mkpa ka ị nwee nkà ọ bụla. Na-asacha na peeled tomato na-echi ọnụ n'ala na a blender, weere na shuga na a 1: 2 ruru. Tinye blueberries, jupụtara na sugar, na ite ndị a kwadebere ma zipu n'ime friji ma ọ bụ ihe ndozi.
A ga-eji ihe ndị a na-esonụ maka nkwadebe: kilo nke blueberries, 220 g shuga, 700 ml mmiri ma ị nwere ike iri lemon. A na-egbutu Citrus na ọkara ma na-etinye nnukwu ihe ọṅụṅụ.
A na-asacha blueberries, tinye ya na nnukwu efere, wụsa 330 ml mmiri na igwakorita na ndụdụ. Tinye akpa na ọkụ ma mee ka obụpịa. Esi nri maka nkeji 13 wee dị jụụ. A na-esi na sieve ugboro abụọ mee ihe a.
Ọ dị mkpa! Ịkwado uru nke sibisi breezea na-atụ aro ka ị kpochaa n'ime ọnwa isii mgbe owuwe ihe ubi. N'otu oge ahụ, ọ ga-adị na friji.
Mmiri na lemon ndị fọdụrụ na-agwakọta ya na sugar ma sie maka minit 10. Mgbe mmalite nke ndo gbakwunye blueberries wee hapụ ọkụ maka minit 3 ọzọ. Mgbe oge ekpochapụrụ lemon ma gwọọ sirop ahụ. A na-awụsa nri na-esi nri n'ime akpa na echekwara na friji.
N'ihi n'eziokwu na akpụkpọ anụ blueberries dị nro, ọ dị mfe iji wepụ ihe ọṅụṅụ si na ya. Iji mee nke a, ghaa mkpụrụ osisi ahụ n'otu akpa nke ákwà ákwà ma gbanye mmiri mmiri ahụ. Usoro a dị mma maka ndị hụrụ ihe ọṅụṅụ ọhụrụ.
Ọ dị mkpa! Blueberries - tomato dị nnọọ ncha na nrụrụ ọbụna n'okpuru ibu nke ha. Ya mere, ichikota maka owuwe ihe ubi, i kwesiri iji obere nkata ma obu mbadamba nkume, nke i nwere ike itinye tomato n'ime otu akwa.
Tụlee otú ị ga-esi zọpụta blueberries, ya bụ ihe ọṅụṅụ ya maka oyi. Iji mee nke a, a na-atụ aro ka ị jiri bred bido, juicer ma ọ bụ anụ grinder. A na-ewe ihe ubi n'ụzọ dị iche ichema uru na-agbanwe agbanwe. Tụlee ha n'ụzọ zuru ezu:
Mgbe ịmechasị ihe ọṅụṅụ ahụ site na igwe ahọrọ, ọ na-adọrọ mmasị ma debe ya. Mgbe ahụ, ihe ọhụrụ a na-agbanye n'ime mmanụ ọkụ na-ekpo ọkụ ka ọ dị ogo 80. Obụpde mmiri mmiri maka nkeji iri abụọ, wee dị jụụ ma wụba ite dị iche iche.
A na-eji usoro nke abụọ eji nhazi nke residues. A na-agbanye ha na mmiri n'otu nha ma tinye obere shuga. Tinye akpa na ọkụ na obụpde maka minit 10, mgbe ahụ dị jụụ na nyo. Iji tinye ekpomeekpo, ị nwere ike ịgbakwunye ihe ọṅụṅụ na-esiri ya. Chekwaa ihe ọṅụṅụ a na friji.
Ụzọ nke ikpeazụ kwesịrị ekwesị maka nkwadebe ntọala maka jelii na ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi. A na-asa bred ma wụsara ya na sugar n'otu nha. Hapụ na ebe dị jụụ maka awa 15. Oge a ezuo iji mee ka ihe ọṅụṅụ dị ukwuu. A na-agbanye ya, a na-agbakwụnye syrup sugar sugar na ruru 1: 2 na nke fọdụrụ. Ọnwụ 6 awa, wee nyo. Nri na sirop na-agwakọta ma sie. Na njedebe, ha na-awụsa ya na akpa ma tụgharịa ya.
A na-eme ka blanks dị ụtọ ọ bụghị nanị site na mkpụrụ osisi (apụl, apricots ma ọ bụ pears). A na-enweta jam dị ụtọ site na egọn (melons) na ọbụna ụfọdụ akwụkwọ nri (tomato, skwọsh).
Tụlee otú e si eme ezigbo mmanya na-acha anụnụ anụnụ. Na-anakọta 3 n'arọ nke tomato ọhụrụ, a na-asa ha ma kpochapụ ya kpamkpam.
Ọ dị mkpa! Maka nkwadebe kwesịrị ekwesị maka ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya, ọ dị mkpa iji nanị mkpụrụ osisi a họọrọ. Dị ka ahụmahụ nri na-egosi, ọ bụrụ na blueberries na-eme ntakịrị, mmanya ga-esi ísì ụtọ.
A na-agbanye ngwakọta nke a na iko nke nnukwu nnukwu ma tinye 2 n'arọ shuga. A na-awụsa lita mmiri ọ bụla, a na-etinyekwa ọtụtụ ọkwa gauze n'olu nke karama wee hapụ ebe dị ọkụ maka ụbọchị atọ. N'oge a, ị ga-amalite ịgba ụka ahụ. Mgbe oge mejupụtara ihe ahụ. A na-asacha karama ahụ kpamkpam ma mejupụta ya na ihe ọṅụṅụ na-adịghị mma. Tụkwasị na nke ọzọ otu iko mmanụ aṅụ na mmiri mmiri. Ejiri akara mmiri na aka ekpe maka ọnwa 2 na ebe ọkụ. Mgbe ahụ, ncha, saa karama ahụ ma na-esi ọnwụ, ọ bụ naanị n'ebe dị jụụ.
Mgbe ọnwa abụọ gara aga, a ga-ehichapụ oge ikpeazụ ma wụsara obere karama ndị nwere ike ịchekwa ruo ogologo oge ma ọ bụrụ na ha na-anọkarị n'ọnọdụ dị nro. Ị nwere ike iri ya mgbe nchekwa dịka ọ dịkarịa ala ụbọchị 60, n'oge a ka mmanya ga-enweta ndò dị ịtụnanya na uto mbụ.
N'ịchọta otu esi edozi blueberries maka oyi, ọtụtụ na-ahọrọ maka nhọrọ a. Taa, e nwere ọtụtụ ntụziaka nke oge anyị ga-eleba anya na nkowa. Kelly jimiri. Maka nri, ọnụ shuga kwesịrị ịbụ ntakịrị obere tomato. A na-etinye mkpụrụ osisi ahụ n'ime ihe oriri, kpuchie ya na ọkara shuga na aka ekpe ka o guzoro ruo nwa oge.
Mgbe tomato na-ahapụ ihe ọṅụṅụ ahụ, tinye akpa ahụ na obere ọkụ ma jiri nwayọọ nwayọọ mee ka obụpịa. Tinye shuga nke ozo ma gbasaa oge ole na ole. Hapụ tank ahụ ka ọ dị jụụ. Meeghachi kpo oku na okpukpu ugboro abụọ. Mgbe akpatre oge, wụnye ozugbo na ite ndị a kwadebere na nke a na-akpọ.
Ọ dị mkpa! Lelee nhazi nke jelii ahụ n'ụzọ dị otú a: tinye otu idebe na iko mmiri. A na-atụle ihe ndọtị dị njikere mgbe nkedo anaghị akwatu, kama ọ na-adaba na ala.
Na ngwa ngwa cooker. A na-ewere mkpụrụ na shuga na nha nhata site na kilogram. Jikọọ ma wụba n'ime pan multicookers. Họrọ mode "Kwụsị" maka awa 2. Na njedebe nke oge, a na-agbanwe ọchịchị ahụ gaa n'usoro ihe omume ahụ bụ "Ntugharị maka di na nwunye" nanị maka nkeji. A na-awụnye mgbochi n'ime ite na akpọre. Na gelatin. Ụdị dị otú ahụ na-etinye ụdị ahụ ọbụna n'èzí mmiri. Osisi na shuga na-ewere na 4: 2. Maka ego a, 1 akpa jelii zuru. Nile tinye n'ime akpa na obụpde maka nkeji abụọ na obere okpomọkụ. A na-awụnye mmiri mmiri n'ime ite, nke a gbagọrọ agbagọ.
Na-enweghị nri. Ezigbo maka nchịkwa novice. Maka nkwadebe nke otu onye na-eje ozi, ọ ga-ezu iji were tomato na shuga dị 1: 2. Ihe niile na-adabere na ikuku dị iche iche ma kesaa n'ime ite mgbochi, ka ị nwee ike itinye shuga na okpukpu 1 cm. Nke a ga-echekwa ihe oriri si na mmiri gbaa ma nye gị ohere ịzọrọ ihe ọṅụṅụ site na tomato na ihe ọṅụṅụ ya ma nọgide na-enwe ọtụtụ ihe bara uru. Na-echekwa ya na-atụ aro na refrjiraeto.
Maka ndị hụrụ usoro ịgha mkpụrụ nke a kpochapụrụ anya, tomato nri dị mma. Ka anyị lebakwuo anya iji mee breeze jam.
Ntụziaka dị otú ahụ chọrọ ego kachasị ego. Maka isi nri na-ewere ụfọdụ mkpụrụ tomato, sugar bụ ọkara ọzọ. A na-ekpuchi blueberries na sugar ma hapụrụ maka awa ise. Mgbe oge setịpụrụ maka ihe dịka minit 35. Oge niile, echefula iwepụ ụfụfụ ahụ. A na-eme ka jam gwụrụ ma wụba n'ime mmiri, na-atụgharị lids. Nke a bụ ụdị nke blueberry jam maka oge oyi, dị ka ntinye onwe gị, ị nwere ike ịgbakwunye ihe ndị ọzọ.
Na-atụle preparations site na bilberry ọ bụghị nanị dị ka nri, ma site na akụkụ ya na-agwọ ọrịa àgwà, ọ na-atụ aro ịṅa ntị na ndị dị otú ahụ ntụziaka maka oyi dị ka jam. Iji dozie were 1 n'arọ nke tomato na sugar, nakwa 300 ml mmiri. A na-asacha blueberries ma tinye ya na akpa nke ha ji nlezianya nweta iji nweta puree. A na-ejikọta sugar na mmiri ma sie ya maka nkeji abụọ. Mgbe ahụ, a na-awụnye bredụl puree n'ime ya na, mgbe ọ na-akpali akpali mgbe nile, a na-ebute ya na obụpde. Esi nri nkeji iri na ise, n'oge a kwadebe akụ. Mgbe oge zuru ezu, a na-etinye ihe ndị mejupụtara ya ozugbo na ite ma tụgharịa ha.
Tụlee otú e si esi breeze compote. Maka nhazi ị ga-atụ anya na maka lita mmiri ọ bụla, a chọrọ shuga shuga. A na-etinye tomato n'ọdọ mmiri, n'oge a iche iche mmiri ma tinye shuga. Mgbe ájá gbazere kpamkpam, a na-awụsa sirop ahụ n'ime ite breeze ma malite ịmịnye ha. Ná nkezi, ọ na-ewe minit 15. Mgbe ahụ, ụlọ akụ na-agbanye ma zipu ka ha dị jụụ. Ọtụtụ mgbe, a na-akwadebe blueberry compote maka oyi enweghị ụlọ ọgwụ. N'ihi ya, ọ ga-ekwe omume na oyi na-atụ n'ụbọchị iji mejupụta ahụ ahụ na-aba uru.
Maka ite okpukpu atọ, 900 g nke tomato, 450 g shuga na lita 3 dị mkpa. Blueberries kwadebe ma jupụta ite ahụ na mkpụrụ osisi na ọkara. Mgbe ahụ, wụsa mmiri mmiri na-ahapụ maka minit 10. Oge a ezu iji kpoo tomato. A na-agba mmiri ma kpuchie ya na ájá. Nanị tupu ncha, mmiri na-awụ. Ọtụtụ ndị nwere mmasị na ihe bara uru compote nke blueberries. Ya mere, ọ bụrụ na ọ dị ntakịrị na ọ na-ekpo ọkụ na mmiri ọkụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ihe niile bara uru.
Ị ma? Ndị America nke mbụ na-eri blueberries na mmiri ara ehi iji nweta isi awọ.
N'ịmara usoro ntụziaka a niile, ị nwere ike imezi ma gbakwunye ihe nke gị ma si otú ahụ tụọ ndị ị hụrụ n'anya n'anya nke mbụ na, nke kachasị mkpa, ọ bara uru na oyi.